UMKHANDLU WAKWADUKUZA NOHLELO LWEGRANT IN AID – Sivubela intuthuko Newspaper
UMKHANDLU waKwaDukuza oGwini olusenyakatho yeKwaZulu Natal oholwa nguKhansela Dolly Govender sewusungule uhlelo lokulekelela izinnhlangano ezingenzi nzuzo zakuyona le ndawo ngoxhaso lwemali. Ngokujwayelekile lolu xhaso lalo Mkhandlu lubizwa ngokuthi yiGrant in Aid.
Lena yimali ebonelela amabhizinisi amancane okanye ke izinhlangano ezingenzi nzuzo ezisuke zibonakala ukuthi ziyakudinga nakanjani ukulekelwa ukuze zibonakale ziba nenqubekela phambili. Minyaka yonke lo Mkhandlu usukujwayele ukufukula osomabhizinisi kanye nazo izinhlangano ezingenzi nzuzo.
Njengamanje izinhlangano kanye mamabhizinisi akhona KwaDukuza afuna ukubonelelwa ngalolu xhaso anxuswa ukuthi afake izicelo ukuze kuzohlungwa ebese kukhethwa lezo zinhlangano ezibonakala ziludinga kakhulu uxhaso.
Lolu hlelo lubonakala luzokwenza umehluko omkhulu kwazise maningi amabhizinisi amancane akhona KwaDukuza abonakale ekhahlamezeka kakhulu ngesikhathi kuhlasela izibhelu ngoJuly.
Kuzokhumbuleka ukuthi uKhansela Govender uhlezi ekuchaza njengento emqoka kakhulu ukubaluleka kokwesekwa kwamabhizinisi amancane kanjalo nazo izinhlangano ezingenzi nzuzo.
Ocwaningweni olenziwe yilo Mkhandlu kuyavela ukutho umonakalo owenzekile emabhizinisini amancane ngezikhathi zezibhelu ucishe ufinyelele kumaphesenti angu-60 okuyinto ebonakala ingenyinhle.
Eminye yemibandela emqoka kakhulu kulolu hlelo ngowokuthi lolu hlelo lubekelwa abantu baKwaDukuza kuphela futhi abafaka izicelo kumele nakanjani kube ngabantu abanamabhzinisi amancane kumbe ke kube ngabantu abanezinhlangano ezingenzi nzuzo.
Kodwa nazo lezo zinhlangano kumele kuqinisekiwe ukuthi yilezo ezibonakala zigxile kakhulu ekubhekelelweni kwezidingo ezimqoka kakhulu zamalunga omphakathi.
Nabantu besifazane nabo lo Mkhandlu uyabagqugquzela kakhulu ukuthi bangazitheli ngabandayo kodwa nabo bazifake izicelo ukuze bathole ukwesekwa ngale mali.
UKhansela Govender muva nje usanda kugcizelela ukubaluleka kokuba abantu besimame babonakale bephumelela emikhakheni ehlukene yezempilo okubandakanya nomkhakha wezamabhizinisi.
“Sesiphelile manje isikhathi sokuthi abantu besifazane bazibukele phansi kodwa manje sekuyisikhathi sokuthi balwe bazuze konke okuhle okubafanele,’’kugcizela uKhansela Govender.
SEYIVULIWE IMEGA CITY EBIKHAHLAMEZEKILE NGEZIBHELU